၁. The Sun သတင်းဌာနကတော့ ယူနိုက်တက်ဟာ နောက်တန်းနေရာအတွက် ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ပေါင် ၄၀ သန်းတန်နောက်ခံလူ ဒိုင်အုပ်ကိုခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပြင်သစ်သားကို ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ဘက် ချဲလ်ဆီးအသင်းကလည်း ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေပြီး နောက်တန်းလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ အပြိုင် ခေါ်ယူရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
၂. စပို့တင်းနည်းပြ ဂျော့ချ် ဆီလက်စ်ကတော့ သူဟာ အသင်းကို ဖာနန်ဒက်စ်မရှိတဲ့ ကွင်းလယ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဝန်ခံပြောကြားလိုက်တာကြောင့် ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ ယူနိုက်တက်အပြောင်းအရွှေ့ဟာ ပိုနီးစပ်လာတယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါပေါ်တူဂီသားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက စပါးကို ရောက်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် စပို့တင်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ညှိမရတာကြောင့် ပျက်ပြယ်ခဲ့ရပါတယ်။
၃. ယူနိုက်တက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာ အခုအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ကစား ၂ ယောက်အထိခေါ်ယူဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ The Athletic သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ စပို့တင်းကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်စ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ နီးစပ်နေပြီး နောက်ထပ်ပစ်မှတ်တွေအဖြစ် လေဗာကူဆင်ကစားသမား ကိုင်ဟာဗက်ဇ် ၊ လက်စတာကွင်းလယ်လူ မက်ဒီဆင် ၊ ဗီလာကွင်းလယ်လူ ဂရီးလစ်ချ်တို့ကိုလည်း ချိတ်ဆက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄. ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် အခုလထဲမှာပဲ ဝုဗ်တိုက်စစ်မှူး ရာအူးလ်ဂျီမီနက်ဇ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ တိုက်စစ်မှူး ဂျီမီနက်ဇ်ဟာ ဒီရာသီဝုဗ်အသင်းအတွက် ၃၄ ပွဲမှာ ၁၇ ဂိုးအထိ သွင်းယူပြီး ခြေစွမ်းပြ ကစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝုဗ်အသင်းကတော့ လာမယ့်ရာသီ ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် သူတို့အသင်းတိုက်စစ်မှူးကို ရောင်းချဖို့ အလိုရှိမရှိ ဖြစ်နေပါတယ်။
၅. The Athletic သတင်းဌာနရဲ့အဆိုအရ ယူနိုက်တက်ဟာ ပေါ့ဂ်ဘာ ၊ တိုမီနေးတို့ မရှိတဲ့ ကွင်းလယ်နေရာတွက် မက်ဒီဆင် ၊ ဂရီးလစ်ဂျ် နဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်တို့ကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကွင်းလယ်ကစားသမား ၃ ဦးဟာ သက်ဆိုင်ရာအသင်းတွေမှာ ခြေစွမ်းပြကစားနေပြီး ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ခေါ်ယူဖို့အတွက် ငွေကြေးအမြောက်အမြားအသုံးပြုရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ယနေ့ည နောဝစ်ချ်နဲ့ပွဲစဉ်အတွက် ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ လူစာရင်း